NDI ABA NA-ABA MBA – hoo!haa!!
UNTH;ARỤ NA MPỤ AKARỊA
ARỤ! MMỌNWU NA-AṄỤ HERO!
Flavor akpọgala Semah India imezi ya anya
"Word4Word Art Project"na-afịọ n'Enugwu
Ndi bi n’Aba na-ekwu hoohaa, na ha agaghị eso eme ntụli aka ọchịchị ala anyị na-abịa nso, ma ọ bụrụ na gọọmenti ala anyị nakwa nke ndi steeti Abia, agaghị eleba anya na nsogbu ha nwegasịrị.
Ọtụtụ n’ime ndi bi n’akụkụ aba dị iche iche dịka Mathew Avenue, Railway Avenue, Ahụrụonye nakwa ogbe Nwogu dị n’me Obuda na-ekwu na nsogbu ha gbadoro ụkwụ na ndi nnọchị anya ha na gọọmenti anaghị ekwuta ọnụ ha.
Ndia dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na gọọmenti etiti nakwa nke steeti Abia emeghị ihe ha kwesịrị imere ha, na ha agaghị eso emee ntuli aka na nhọpụta nke afọ na-abịa abịa. Ha kwara arịrị wee sị na oge udu-mmiri na-abụrụ ha oge iru uju maka idei mmiri.
Otu onye bi n’Aba bụ Jagheth Charles Ọfọjị sịrị n’ọbụ site na igụpụ onwe ha na ntụli aka nke afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa ka a ga-esi mara na ihe ha bụ ọkụkọ bu mmiri achọ dị ha ezigbo mkpa. Ọ sịrị na ike agwụgo ha na ime mkpesa, ma kwue na ihe chere ha n’ihu ugbua bụ igụpụ onwe ha na ntụli akaa. Japhath sịrị na ha anaghị asịkwa ka abịa rụwara ha okporo ụzọ ọgba wara wara, kama ka abịa mepere ha ụwara mmiri si apụgasị ka mmiri kwụsị iri mmadụ n’ogbe ahụ.
Ọ sịrị na ha achọghị igbatara ha mkpu enyem aka mgbe mmiri kwatusịrị ụlọ ha. Ọ jụrụ sị ọbụrụ na mmiri emibichaa ụlọ ha ebutere ha ihe oriri na akwa ụvarangidi, kedu ebe ha ga-edowe ihe ndia?
Ọ sị biko, ndia chekwaara onwe ha ego igba mkpu enyem akaa site na igbochiri ha nsogbu idei mmiri tupu na ọ bịa.
Onye ndu ndi sigasi n’akụkụ na-enwe idei mmiria bụ Pastọ Chisom Oriakụ kwara arịrị sị na ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-echeta ha ma ya rue n’oge ntụli aka mana ana-ahapụ ha dịka atụrụ enweghị onye nche ozugbo emechara ntụli aka.
Previous Post: “PASTỌ OGBU MMADỤ” ACHỌGHỊ ỊNWỤ
Next Post: “MR. IBU NA NWUNYE YA…
34 Oby Okoli Avenue, Awka